आफ्नै घाँटी ब्लेटले रेटेपछि... | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
विराटनगर महानगरपालिका-१६ नेपाल बैंक पछाडिको सडकमा एक पुरुष आइतबार साँझ रक्ताम्य अवस्थामा लडिरहेका भेटिए। रक्ताम्य अवस्थामा लडिरहेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खवर गरे। घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दा ब्लेडले आफ्नै घाँटी रेटेर घाइते भएर लडेको पाइयो।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका घर भएका ३१ वर्षीय लक्ष्मण लिम्बू सडकमा लडिरहेको अवस्थामा भेटिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार खिउजुले बताए। रक्ताम्य अवस्थामा भेटिएका उनलाई प्रहरीले उद्धार गरेर उपचारका लागि कोसी अस्पताल ल्याएको छ।
ब्लेडले उनको श्वास नलीमासमेत भेटेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रज्वल खतिवडाले जानकारी दिए । डा. खतिवडाले तत्काल घाँटीको शल्यक्रिया गराउनु पर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।
सामान्य बोल्न सक्ने अवस्थामा उद्धार गरिएका लिम्बू लागुऔषध प्रयोगकर्ता भएको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार उनी दैनिक जसो भारतको जोगवनी पुगेर लागुऔषध सेवन गर्दै नेपाल फर्कने गरेका थिए।
उनले घरमा बुवा र आमा वृद्ध अवस्थामा रहेका कारण आफूलाई तनाव भएकाले ब्लेडले घाँटी रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरेको प्रहरीलाई बताएका छन्। डीएसपी खिउजुले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए।
समाचारआफ्नै घाँटी ब्लेटले रेटेपछि...